Isbeddelka Netflix wuxuu ku yimaadaa ciyaaraha fiidiyowga ee Utomik | Hal-abuurka Online
Isbedelka Netflix wuxuu u yimaadaa cayaaraha fiidiyowga ee lala yeeshay Utomik
Jose Angel | | General, Dhiirrigelinta
Haddii Netflix ay dejiso isbeddel Sida loo daawado shineemo maanta, wax nasiib ah maaha in ciyaaraha fiidyowga ay hadda yihiin. Oo dhammaanteen waan ognahay madal Netflix maanta. Aan dhammaadka lahayn ee filimada iyo taxanaha nuxurka asalka ah iyo iibsashada. Soo saarista sida 'Bright' ama filimo kale Scorsese, Tarantino, Nolan ... Agaasimayaasha filimada ugu fiican waxay leeyihiin booskooda isaga. Oo halkaas, HBO, Movistar plus, iwm. Yaa u dhowaan doona Utomik?
Utomik wuu qaatay habkan oo wuxuu u qaatay dhulkiisa. Haddii Netflix ay tahay mid ka mid ah boqorada farshaxanka toddobaad, Utomik wuxuu iska dhigayaa inuu ku jiro ciyaaraha fiidiyowga. Madal aad ka heli karto rukhsad bille ah oo aad 'kiraysato' ciyaaraha fiidyaha ee aan dhammaadka lahayn adiga oo aan xaddidnayn inaad ku ciyaarto. Tani waxay u muuqataa inay horseedayso baabi'inta ciyaaraha jirka. Ijaar ciyaarta fiidyaha oo ciyaar ilaa aad ka caajisto, si aad 'gaarsiinmar kale oo soo deji mid kale.
1 Waa maxay Utomik?
2 Sidee ayuu Utomik u shaqeeyaa?
3 Laga soo bilaabo Batman ilaa Metro 2033
Waa maxay Utomik?
Waxaan ka soo koray bilow madax banaan oo aan lahayn taageero warshadeed oo aan haysano maktabad ka badan 750 ciyaarood iyo in ka badan 100 la-hawlgalayaasheeda daabacaadda in ka badan 2 sano. Taageeradaas waxaa ku jira Warner Bros. Games, Disney, SEGA, THQ Nordic, Ciyaaraha Epic, Curve Digital, IO Interactive, iyo qaar kaloo badan. Way ka badan tahay madal ciyaaraha kale ee is-diiwaangelinta waana bilow uun.
Waxaa la aasaasay 2014-kii oo ay aasaaseen bulsho ka mid ah ciyaartoyda Dutch-ka iyo 2016 kii ugu horreeyay ee beta ayaa la sii daayay.. Iyada oo aqoonsi yar oo caalami ah ilaa hadda, waxay soo saartaa nuqulkeedii ugu dambeeyay waxaana loo fuliyay si guul leh.
"Sida hadda si rasmi ah loo bilaabay, isticmaalayaashu waxay helayaan galaangal aan xadidnayn oo ay ku ciyaaraan in ka badan 750 ciyaar $ 6.99 bishii * ama $ 9.99 bishiiba qorshaha qoyska ee afar. Siideynta waxaa sidoo kale ku jiri doona naqshad cusub oo la wanaajiyey oo macmiil ah."
Iyada oo la bilaabay in ka badan 750 ciyaarood way fududahay in la sameeyo xisaabinta madaxaaga, si aad u ogaato faa'iidada mashruuca. Haddii ciyaarta ugu sareysa ay kor u kacdo € 80, bixinta € 6,99 ama € 9,99 bishiiba afar qof ayaa noqon doonta faa'iido badan. Oo dhammaan ka yimid guriga iyo iyada oo aan la sugin. Sidoo kale ay ku jiraan xakamaynta waalidka ee kuwa yaryar.
Sidee ayuu Utomik u shaqeeyaa?
Waqtigan xaadirka ah, buugga Utomik wuxuu leeyahay 765 ciyaarood oo ka socda 50 shirkadood oo caan ah. Laga soo bilaabo Warner ilaa Disney iyada oo loo sii marayo shirkado kale oo caan ah sida SEGA, Ciyaaraha Talltale ama THQ, iyo kuwa kale. Buug-yaraha ku koraya qiyaastii 15 ama 20 ciyaar fiidiyoow ah bishii, sida shirkadu ku sheegtay shabakadeeda.
Muhiimadu waxay noqon doontaa soo dejinta. Maanta, laga bilaabo dukaanka laga bilaabo konsole kasta oo ciyaarta ama xitaa madal Steam PC, iibsashada ciyaarta online iyo soo dejinta way adag tahay. Utomik waxa uu ballan qaaday in aanay taasi dhici doonin.
Markaad soo dejisanayso ciyaarta fiidyaha, waa inaad sugtaa ugu yaraan wakhtiga rarista nuxurka muhiimka ah bilawga. Marka culeyskan, oo noqon kara 20% wadarta ciyaarta fiidiyowga, la sameeyo, waxaad bilaabi kartaa ciyaarta. Inta aad ciyaareyso, inta soo hartay waxaa lagu soo dejisan doonaa gadaal. Tani ma saameyn doonto khibrada ciyaaraha Sidan, waxay siin doontaa gunno ciyaartoyda aadka u jecel inay ciyaaraan.
Laga soo bilaabo Batman ilaa Metro 2033
Iyadoo ay jirto in labadii sano ee la soo dhaafay dhowr shirkadood ay bilaabeen adeegyo la mid ah, sida PlayStation Hadda, waxaa jira rajooyin weyn oo lagu dhejiyay goobtan, kaas oo ujeedkiisu yahay inuu noqdo 'Netflix of video games' ka dib markii uu heshiis la gaaray in ka badan boqol shirkadood inta lagu jiro marxaladda beta ee adeegga.
Hadda, ma laha magacyo la aqoonsan yahay. Fifa ama Call of duty franchise ma laha faraq, sii daynta jirtana waxay leedahay waqti badan. Laakiin kobacdooda oo ay la shaqeeyaan shirkadaha sida Disney, Warner, SEGA, ma ahaan doonto sugitaan dheer marka shirkadahan ay ku soo biiraan.
Kuwa horey ugu jiray nooca BETA ee xulafada daacadda ah ee shirkadda, qiimuhu wuxuu la mid noqonayaa kii ay haysteen. Waxa uu u egyahay €5,99. Inta lagu jiro wakhtiga la diiwaan galiyay, iyada oo aan xaddidnayn sanado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Isbedelka Netflix wuxuu u yimaadaa cayaaraha fiidiyowga ee lala yeeshay Utomik
Caqabadda 365 astaamaha nashqadeeyaha oo macno ku leh qaab qoriddooda
Lix amarro qasab ah kahor dhiibida kaarka ganacsiga